Sei vanoitisa ICO kuSwitzerland - Blockchain News
Sei vanoitisa ICO kuSwitzerland
Takadzidza kubva Swiss mutemo akasimba Goldblum uye Partners, nokushumira varongi ose ICO, sei yakanakisisa pamwe makambani European uye kuronga chiratidzo kuSwitzerland.
Nei vanhu vakawanda vanofunga pamusoro akabata ICO kuSwitzerland
Muchikamu ichi ndicho mutero fashoni – Ethereum Foundation, Tezos, akadzika, Lykke akaita Switzerland rakakurumbira crypto vemunharaunda, uye Trem ndiyo yakanaka nzvimbo vanyorese boka nokuda zvimunakire management uye mutero.
The guta Kutarisirwa anogamuchira BitCoins sezvo mutero kubhadhara kusvikira 200 mafranc. Kunyoresa wekambani zvinogonawo kuitwa pakatanga BTC muguta guru mvumo; mutero Kutarisirwa anofunga crypto-mari sezvo zvinhu uye zvakakodzera rinoshanda mutero.
cherechedzo, ndangariro mabasa, nezvaidiwa kuva munharaunda mukuru ari pamwe kukonzera basa akasimba kana mari, kuti Switzerland yakavimbika kuti makambani, zvinonzwisisika musangano iri ICO uye mwoyo all scammers.
Panguva kutanga kwekupwanyiwa, tinoratidza kuti musangano iri ICO tsvaka vamwe vanogona mari yakawanda mari. Pamusoro pe, unofanira kuitisa nokuda Diligence pfungwa, kusika munhu roadmap nokuda chirongwa achava chikamu White Paper, uye kuumba mashoko yokurerwa mari muchimiro Terms uye Conditions, uyewo kuongorora mashoko ari promotional zvinhu uye mharidzo abvume.
Pane matunhu mukana yokuwana ane investor mu nedanho inonzi Roadshow, kunosanganisira nokutuma vaitaura musangano, vakabata mharidzo, achipindura vanoita’ mibvunzo uye, semagumo, kugamuchira mari. Ichi chinhu chinokosha basa – pindura mibvunzo inonyanya runonyengera, chiso nechiso, apo pasina mubvunzo kusazivana rinouya.
By sungano varongi, Panguva iyi tinogona kupa gweta kuti bhuku somunhu chipangamazano chirongwa, uye kupindura mibvunzo kubva ICO nemakasitoma pamutemo.
Mushure makambani makuru zvinowanikwa, isu dzinorumbidza kutanga vakanga vanyorwa kambani: chinhu analogue pamusoro LLC ane mitemo pavane 20,000 mafranc, CJSC – 100,000 mafranc. Kana yechipiri, shareholders ose kusazivikanwa. Zvinogonekawo kutenga akagadzirira akagadzirwa kambani. In zvakafanana, nechikumbiro chaicho unoitwa nokuda kudiwa Licensing kuna regulator, okutanga nyaya dziri nemabhengi pakugadzirira mabiko mari kubva makambani madiki.
mari All akagamuchira mumatanho izvi inozviisa mitero pakupera iri nhau nguva, uye hakuna kusiyana kubva basa mutero zviremera dzimwe nyika.
Ko zvakakodzera kusika mari ICO kuSwitzerland ?
Semutemo, Mari masangano tinofanira kugara kuti kushandisa mari kana mipiro vamwe zvirongwa dzisina chokuita zvokutengeserana uye regai kubatsirwa basa iri.
Zvakare: uhu hazvirevi chinhu dzokutengesa basa, kugamuchira mari kubva makambani uye kubhadhara navo shure nomubayiro.
The nyaya TEZOS, musangano iro vasina kugamuchira chero tsananguro kubva magweta muSwitzerland uye akagamuchira mari kubva makambani ari muchimiro Zvipo, achiziva kana asingazivi – inofanira yakajekeswa pamiedzo akawanda, zvakajeka kuratidza kudiwa kungandipa gweta mumatanho zvose nokuda mativi. Anoreva Nyanzvi vanogona kuva mutoro kurumbidza kwavo kana zviito.
$524M NOT chakabiwa mu ...
Previous Post:Blockchain News 31 Ndira 2018
Next Post:Zvibereko ASIC Chips kubva Samsung